चकचके बच्चा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७४, २३ जेष्ठ मंगलवार १०:५३ मा प्रकाशित
के तपाईको बच्चा विद्यालय जान मान्दैन, चकचके छ अथवा चुम्बक टाँसिएजस्तो टेलिभिजन हेरिरहन्छ ? यदि छ भने यो एक किसिमको मानसिक समस्या हुनसक्छ । बालबालिकाहरुमा भएको मानसिक समस्या उनीहरुको व्यवहारबाट देखिने गरेपनि यसलाई वास्ता गरिदैन ।
बानी व्यवहारमा परिवर्तन
बच्चा चकचके हुने पनि मानसिक समस्याको एउटा रुप हो । यसलाई एटेन्सन डेफिसेट हाइपरएक्टिभिटी डिस्अर्डर भनिन्छ । यस किसिमको समस्या भएका बच्चाहरुले अध्ययन र विभिन्न क्रियाकलापमा ध्यान दिन सक्दैनन् ।
कक्षा कोठामा पढाइमा ध्यान नदिने
कसैका सामान झिकिदिने
घरमा चुम्बक टाँसिए
सरी टेलिभिजन हेरिरहने
टेलिभिजन धेरै समय हेर्न नदिने
सानो उमेरदेखि नै टेलिभिजन हेर्ने बच्चाहरुमा एटेन्सनको धेरै समस्या हुने गर्छ । अमेरिकन एकेडेमिक अफ पेरियाट्रिक्सले बच्चालाई दिनमा एक घण्टा भन्दा बढी टेलिभिजन हेर्न नदिन सुझाव दिएको छ । टेलिभिजनमा हरेक सेकेन्डमा केही न केही परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र मस्तिष्कले जतिसक्दो चाँडो यसलाई क्याच गर्नुपर्छ र बच्चाहरु चुम्बक टाँसिएजसरी टेलिभिजन हेरिरहेका हुन्छन् । यसले बच्चालाई फास्ट एक्सनको बानी पार्छ । त्यसैले बच्चालाई धेरै समय टेलिभिजन हेर्न दिन हुँदैन ।
वच्चाहरुसँग समय बिताउने
आफ्नो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अभिभावकहरु व्यस्त छन् । उनीहरुमा भागदौड छ । त्यसैले शहरीकरणले बच्चाहरु रिस्ट्रिक्टेड भएर आएका छन् । उनीहरुको स्वभाव असामान्य तरिकाले विकास भइरहेको छ । तनावका कारण बच्चाहरुमा मानसिक समस्या बढ्दो गतिमा भएकाले अभिभावकले उनीहरुका लागि प्रयाप्त समय दिनुपर्छ । यसबाट बच्चाहरुले आफ्नो समस्या बताउँछन् ।
सिर्जनशील काममा संलग्न गराउने
बच्चा बिग्रियो, भनेको मान्दैन
स्कूल जान मान्दैन
बीचबीचमा बेहोस भएजस्तै ढल्छ
कहिलेकाँही सिधै झगडा गर्न आउँछ
रिसाउने र पिट्ने गर्छ
पढ्न नै सक्दैन भन्ने धेरै अभिभावहरुको गुनासो हुन्छ । त्यसैले बच्चालाई अन्य कुनै सिर्जनशील काममा संलग्न गराउने कोशिस गर्नुपर्छ ।
मानसिक समस्याको कारण पत्ता लगाउने
तनाव र मानसिक समस्या एक अर्काका पर्याय हुन् । पढ्न नसक्ने बच्चाहरुलाई निकै तनाव हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा वंशाणुगत र वाह्य वातावरण दुवै मिलेर बच्चाहरुमा तनाव उत्पन्न हुन्छ । यसरी तनाव उत्पन्न हुनमा कहिलेकाँही वंशाणुगत र कहिलेकाँही वातावरणीय बाह्य कारणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले बालबालिकामा मानसिक समस्या बढाउनुको कारण पत्ता लगाउने कोशिस गर्नुपर्छ ।
बच्चामैत्री र सुमधुर वातावरण
बच्चाहरु अरुको रुटिनमा चल्नुपर्छ । पढ्न र लेख्नुका साथै साथीभाइ बीचमा स्वीकार्य हुनुपर्ने कुराले बच्चाहरुमा तनाव बढाइरहेको छ । म कहाँ फिट हुन्छु भनेर बच्चाले आफ्नो पहिचान खोजिरहेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको समस्या बुझ्ने कोशिस गर्नुपर्छ । यसका साथै घरमा बच्चामैत्री र सुमधुर वातावरण बनाउनुपर्छ । जस्तोः घरमा बुबाआमाबीच कलह नगर्ने, जाँड रक्सी खाएर घरमा नआउने आदि ।
बालबालिकामा देखा पर्ने ‘मल्टी-सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम’ बारे जान्नै पर्ने कुरा
जनस्वास्थ्य सरोकार । मल्टी सिस्टम इनफ्लेमेटरी सिन्ड्रोम (एमआइएस-सी) भनेको कोरोना संक्रमित बालबालिकाको मुटु, फोक्सो, मिर्गौला,
कोरोना महामारीमा बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षामा ध्यान दिन आग्रह
जनस्वास्थ्य सरोकार, कर्णाली । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारीले मुलुकमा कृषि, पूर्वाधार विकास, आर्थिकलगायतका विभिन्न क्षेत्र
कोभिड-१९ को तेस्रो लहरबाट कसरी जोगिने ?
कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका लागि पुर्व तयारी गर्न सरकारसँग प्रशस्त समय थियो । तर पुर्व
शरीरको उँचाइ बढाउन के गर्ने ? यस्तो छ उपाय
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सबैजसो मानिसलाई हट्टाकट्टा सलक्क ज्यान परेको मानिस मन पर्दछ । मानिस